3D Sensor Unicorn Oberbeck သည်ယွမ် ၁. ၈ ဘီလီယံကျော် မြှင့်တင်ရန် Alibaba ကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပြု လိမ့်မည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုPandaily ဒီဇင်ဘာ 8, 2021 ဒီဇင်ဘာ 8, 2021 မှာ Posted
အင်္ဂါနေ့Shanghai Technology Innovation Board (Star Market) စာရင်း ကော်မတီသည် Aobo ၏ IPO လျှောက်လွှာ ကိုအတည်ပြု ခဲ့သည်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် Star Sky ၏ IPO မှတစ်ဆင့် ယွမ် ၁. ၈ ၆၃ ဘီလီယံ ကိုမြှင့်တင် ရန်စီစဉ် ထားပြီး ရန်ပုံ ငွေများကို 3D sensing နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ အတွက်အဓိက အသုံးပြုသည်။ ဤ ငွေ သည် လိုအပ်သော လည်ပတ် ငွေ အရင်းအနှီး ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်း ပေးလိမ့်မည်။
Obibeck သည်အဓိကအားဖြင့် 3D sensing ထုတ်ကုန်များ၏ ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချ မှုများ တွင်အဓိက ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏အဓိက ထုတ်ကုန် များတွင် 3D အာရုံခံ ကိရိယာများ၊ စားသုံးသူ နှင့်စက်မှု ပစ္စည်းကိရိယာ များပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ ဖောက်သည် များမှာ Ant Group နှင့် OPPO ကဲ့သို့သော လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ် များဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အကြီးဆုံး ရှယ်ယာရှင် မှာ Ant Group ၏ အစုရှယ်ယာ လက်အောက်ခံ Shanghai Yunxin Venture Capital Management Co., Ltd. ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး AI3D sensing နည်းပညာ ကိုအဓိက ထားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ တည်ထောင်သူ Huang Yuanhao ကို ၁၉၈၀ တွင် Guangdong, Chaozhou တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Obibeck ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖြစ်သည်။ သူသည် ကုမ္ပဏီ ၏ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ ၏အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည် အခွက် တဆ ယ် ပရိုဂရမ် များအတွက် အမျိုးသားရေး ကျွမ်းကျင်သူ နှင့် optical တိုင်းတာခြင်း အတွက် နိုင်ငံတကာက ကျော်ကြား ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှန်ကျန်း တွင် Orbbec 3D sensing နည်းပညာ ကိုတည်ထောင် ပြီးနောက် Huang သည် ကုမ္ပဏီ အား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏ပထမဆုံး 3D sensing ချစ်ပ် ကိုအောင်မြင်စွာ တီထွင် နိုင်ခဲ့ပြီး စားသုံးသူ ဦး စား ပေးသော 3D sensing ကင်မရာ များ ကိုစတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤ အောင် မြ င်မှုသည် Apple ၊ Microsoft နှင့် Intel ကဲ့သို့သော နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး များ၏ လက်ဝါးကြီးအုပ် မှုကို ချိုးဖျက် နိုင်ခဲ့ပြီး နက်ရှိုင်းသော ကွန်ပျူတာ ချစ်ပ် များထုတ်လုပ် နိုင်သည့် AISA ၏ပထမဆုံး (နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက်) ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Obbit သည် Hongde Investment ၊ SAIF မိတ်ဖက် များ၊ MediaTek, GF Securities, CITIC Securities နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မျက်နှာသာ ကိုရရှိခဲ့သည်။ Sweep Payment တွေ ခေတ်စား လာ တာနဲ့ အမျှ Alibaba ဟာ တိုးတက် နေတဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကို သတိထားမိ လာတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလတွင် Orbbec သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိသော Round D ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲကို Ant Financial Service က ဦး ဆော င်ခဲ့ပြီး SAIF Partners ၊ Green Pine Capital Partners နှင့် Sirius Capital တို့က ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။